Fanamasinana menaka sy fanavaozana toky nataon’ny pretra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Les enfants souffrent aussi des conséquences de la pandémie il y a 6 jours
«Ary nahita izy ka nino fa nitsangan-ko velona tokoa ny Tompo.» il y a 10 jours
Raha mbola misy koa ny fanantenana ! il y a 10 jours
Mivelatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra il y a 14 jours
L’eau est un trésor pour mettre en œuvre de développement. il y a 16 jours
Emma il y a 25 jours
“Ato amiko ny Fanahin’ny Tompo fa nanosotra ahy hitory Vaovao Mahafaly…” Tenin’Andriamanitra nalaina tao amin’ny Bokin’Izaia. Io ilay andalan-tsoratra masina novakin’i Jesoa, tao amin’ny Sinagogan’i Nazareta. Toa Azy, ny Pretra koa dia olona voahosotra, irahina hitory ny Vaovao Mahafaly sy hiandry ny ondrin’izy Tompo.
Teo ambany fitarihan’ny Arseveka, Mgr Rabemahafaly Fulgence, tanteraka ny harivan’ny talata 9 martsa lasa teo ny Eokaristia fanamasinana menaka (messe chrismale), teto amin’ny Diosezy Fianarantsoa. Io ilay menaka ahosotra amin’ny kristianina rehefa mandray Sakramenta. Ahitana ny menaka masina fanosorana izay atao Batemy. Faharoa ny menaka masina fanosotra amin’izay mandray ny Sakramentan’ny marary. Ny fahatelo kosa, ny anosorana ny olona izay mandray ny Sakramentan’ny Fankaherezana sy ireo miroso amin’ny laharana maha mpisorona dia ny Diakra, ny Pretra ary ny Eveka. Tafavory tao amin’ny Katedraly Anarana Masin’i Jesoa, noho izany ny Pretra ato amin’ny Diosezy, notronin’ny kristianina maro. Fotoana rahateo koa io, namerenan’ny Pretra ny toky nataony tamin’ny andro nanamasinana sy nanosorana azy.
Nambaran’ny Arseveka tamin’ny famoaboasana ny Tenin’Andriamanitra fa nandalovan’i Jesoa tsikelikely ny dingam-piainana voasoritra ho an’ny zanak’olombelona”. Notaizaina izy tamin’ny fahazazany. Nanomboka nandeha tamin’ny fahatanorany. Rehefa tonga olon-dehibe, nahazo tso-drano ka nandeha. Nataon’i Joany Batemy, tao amin’ny ranon’i Joridany Izy. Tamin’izay indrindra no nisy feo avy any an-danitra nanambara fa Izy ilay Zanaka malala sady ankasitrahin’Andriamanitra. Izy Ilay mendrika hohenoina. Talohan’ny nanombohany ny asany dia nitokana efapolo andro sy efapolo alina tany anefitra aloha Izy. Nisy fotoana niverenany tao Nazareta, tanàna nahabe Azy ka nandehanany nivavaka tao amin’ny Sinagoga. Nasain’ny mpitarika hamaky ny tenin’Andriamanitra i Jesoa, ka ny Bokin’Izaia Mpaminany toko faha 61 no novakiany: “Ato amiko ny Fanahin’ny Tompo fa nanosotra ahy hitory Vaovao Mahafaly…” Andalan-tsoratra masina mankahery ny vahoaka manaraka hatrany ny antson’Izy Tompo Andriamanitra. Niainga avy amin’ny tany sarotra nambaboana azy saingy tafaverina soa aman-tsara tao Jerosalema ihany. Niova ho hafaliana sy filaminana ary fiadanana izay rehetra nampitebiteby teo aloha. Tanteraka izany satria Andriamanitra tsy mba mivadika hatramin’ny mandrakizay. Izy ilay Alfa sy Omega. Izy koa no maniraka ny vahoaka mpisorona, ho mpaminany sy ho mpanjaka. Ireo teny telo ireo no ifankaherezan’ny mpianatr’i Jesoa.
Nampahatsiahivin’ny Arseveka fa ao anatin’ny fankalazana ny faha 150 taona ny nidiran’ny finoana teto Fianarantsoa ny Diosezy. Tsy nitsahatra nandroso, hoy izy, ny tantaran’ny finoana ato amin’ny Dosezy. Maro ny misionera nifandimby teto, indrindra tamin’ny zato taona voalohany. Zato taona faharoa, efa vitsy ny misionera avy any ivelany fa ny teratany Malagasy no misionera eto amin’ny taniny. Mandray ny fanosorana isika ka hirahina history teny soa mahafaly amin’ny malahelo… Ny mpisorona rehetra dia manohy an’izay nanosorana an’i Jesoa Kristy. Irahina izay voahosotra sy nohamasina. Tsy mandeha amin’ny herin’ny tena na ny fahaizana amam-pahalalana samy irery anefa fa miaraka amin’ny Fanahy Masina ao am-po sy ny Eglizy izay mankahery sy maniraka.
Nitodika tamin’ny pretra rahalahiny ny Arseveka, nizara ny fahitany ny fiainan’ny pretra. Nosoritany mazava ny risi-po ananan’izy ireo eo am-piandohana. Reradreraka ihany anefa rehefa tonga ny adim-piainana any amin’izay nanirahana. Mety ho kivikivy na misalasala koa indraindray. Mety mihemotra ihany koa, ny hafanam-po, hoy hatrany ny Arseveka, raha toa ka ny fahaizana amam-pahalalana ananana ary ny fomba nitaizana no heverina fa nahatonga ho Pretra. Nankaheriziny izy ireo hiankina hatrany amin’ny safidim-pon’Andriamanitra ilay niantso. Ny alakamisy masina maraina no tena fanaovana izao fankalazana izao, na ny "Messe Chrismale". Naroso mialoha anefa izany satria mbola hanatratra ny lamesan’ny Alakamisy masina hariva any amin’ny Distrika sy Paroasy ny Pretra. Olona voahosotra koa ny kristianina. Zanaka tian’Andriamanitra ka miombona amin’ny Pretra amin’ny fanasoavana ny Eglizy Reniny. Tsy misy afaka hitan-damba satria samy irahina hitory Vaovao Mahafaly.
Teny Mahavelona : « Mahery ny Finoana omban’ny Fanantenana sy Fitiavana …». - il y a 2 jours
Lu sur le net : En Afrique, les remèdes traditionnels font de l’ombre aux vaccins contre le Covid-19 - il y a 3 jours
Teny Mahavelona : «Ary nahita izy ka nino fa nitsangan-ko velona tokoa ny Tompo.» - il y a 10 jours